Imala Waggoota 25: ''Yeroo sanatti namni ni mo'atti jedhee na eege hinturre.'' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Daraartuun waggoota 25'n dura Baarseelonaatti mo'atte
Baay'ina meedaaliyaa fi waancaa manashee keessaa ilaaluun qofti, leenjiifi dafqa akkasumas kutannoofi cimina atileetiin tun keessa dabarteef ragaa dha.
Injifannoowwan dirree dorgommii atileetiksii irratti galmeessiste, oolmaa isheen biyyasheef oolte akkasumas waadaa uummatasheef seente hagam kabajaa akka turte agarsiisu.
Fiigichawwan meetira kuma sadii hanga maaraatoonii akkasumas fiigichi qaxxaamura biyyaa ishiin fiigde hundi jabinaa fi ofitti amanamummaa ishee mul'isu.
Hawwii bara ijoolummaa ishee - Barsiisummaa irraa hanga atileetiksii, itti aansees hojiin inveestimentii imala jireenyaa ishee keessatti iddoo guddaa qabatu - atileet Daraartuu Tulluu.
Image copyright PASCAL PAVANI/AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Daraartuun morkii cimaan booda, Elenaa Meyeriin, Baarseloonaatti mo'atte
Waggoota 25 baranaa Oloompikii Baarseloonaa
"Yeroo sanatti namni ni mo'atti jedhee na eege hin turre. Addunyaan atileetii Afriikaa Kibbaa, Eleenaa Meyeriin eegaa ture" jetti Daraartuun.
Olompiikii Ispeen, Baarselonaa, bara 1992 adeemsifame irratti, Eleenaa Meyeritti aanseellee tilmaama guddaa argatanii kan turan atileetota biyya Ameerikaafi Ayeerlaand turan.
Haata'u malee, sadarkaa dandeettii ol'aanaa fi ofitti amanamummaa qabduun, akkasumas gorsaaf haamilee leenjistoota isheetiin, morkattootashee of duubatti gattee miliqxe.
Ishee mo'achuu hin dandeenye. Warqee jarri dharra'aa turanis harkatti galfachuun dubartii gurraattii afriikaa meedaliyaa warqii Olompikii argattee ishee jalqabaa taate.
"Olompiikiin Baarseloonaa jireenya koo baay'ee jijjiire. Ajajjuu Shantamaa irraa gara Kumaalaattin guddadhe. Miindaan koos naannoo qarshii dhibba lamaa tures, gara dhibba jahaatti ol guddate.
Uummata birattis beekkamtiifi fudhataman argadhe." jechuun jijjiirama Oloompikni Baarseloonaa fide, BBCtti himte.
Warqeen Olompikii Baarseloonaa Daraartuun argatte isheef qofa osoo hin taanee uummata guraacha addunyaattif faajjii mo'achuu danda'uu ta'e.
Kana malees atileetoota dubartoota fakkenyummaashee horatanii Itoophiyaa bakka bu'uun injifachaa turaniif fi jiraniif ciminni Daraartuu galaa sammuutti.
''Olompiikiin Baarseloonaa jireenya koo baay'ee jijjiire''- Daraartuu Tulluu
Daraartuu fi garmaama fardaa
Yeroo ijoolummaa isheetti, Daraartuun, fardeeniif jaalala guddaa qabdi turte. Jaalalli garmaama fardaaf qabdu abbaashee waliin wal ishee fakkeessa.
Abbaanshee maqaa farda isaaniitin 'Abbaa Jootee' jedhamanii akka waamaman natti himte. Urufni Xamanjaa jedhamu, urufa garmaama fardaa, Daraartuun farda sakarsiisaa fi gulufaa itti guddattedha.
"Farda yaabbachuu baay'een jaaladha. Wayitan horii tiksu, yeroon iddoo dhiyoos ta'ee fagootti ergamu fardaan malee hin deemu ture" jetti.
Haata'u malee, erga gara Finfinnee dhuftee farda gonkumaa yaabbattee akka hin beekne natti himte.
Goodayyaa suuraa Meedaaliyaawwan Daraarttu Tulluu
Atileetiksii Itoophiyaa fi miseensummaa koree hojii gaggeesituu Oloompikii
Meedaaliyaan Itoophiyaan gama atileetiksiin argattu yeroodhaa gara yerootti gadi bu'aa akka dhufeefi morkattummaan biyyattis xiqqaachaa akka jiru namoonni baay'een dubbatu.
Dorgommiiwwan idil addunyaa yeroo dhiyoo Itoophiyaan irratti hirmaatte yoo ilaalle - Oloompikii Riyoo irratti warqee 1, meetii 2fi nahaasa 5 waliigala meedaaliyaa 8n addunyaaraa sadarkaa 44ffaa qabattee galte.
Shaampiyoonaa atileetiksii idil addunyaa dhiyeenya kana Landan irratti taasifameen immoo, meedaaliyaa 5n xummurte.
Biyyi ollaafi morkattuu yeroo hundaa , Keniyaan, meedaaliyaa 11 yogguu fudhattu, Itiyoophiyaan ammoo, isheerraa sadarkaawwan shaniin duubatti haftee, sadarkaa 7ffaan xumurte.
"Dorgommiiwwan lamaan kanneen irraa barannee gara haala duraan turetti deebi'uuf hojjechuu qabna," kan jettu atileet Daraartuu Tulluu, rakkoon atileetiksii Itiyoophiyaa mudate gadfageenyaan qoratamuu akka qabu eerti.
Kanaafis Olompikii Tookiyoo waggoota sadi booda taasifamuuf akkamitti hojjechuu qabna kan jedhu irratti ishee fi miseensoonni koree hojii gaggeesituu Olompikii waliin hojjecha akka jiru.
Kana malees gama atileetoota dandeettiifi muuxannoo horataniifi kanneen amma jiran bakka bu'uu danda'an horachuutin magaalaa Boqojjiitti iddoo lenjii atileetotaa ijaaruuf akka karoorfatan natti himte.
Goodayyaa suuraa Daraartuun yeroo ammaa investimanatiiwwan adda addaa irratti hirmaattee jirti
Atileetoonni galiiwwan atileetiksiirraa argatanitti fayyadamuun hojiilee investimantii gurguddaa hojjetu.
Biyya keenya keessattis atileetoonni bu'aa badhaasa atileetiksii irraa argatanitti fayyadamuun hojiiwwan investimantii garagaraa hojjechuun qabeenya horatan baay'eedha.
Hojiin investimantii atileetiksii ka'umsa godhachuun hojjetamu faayidaa dhuunfaafi maatii bira darbee, lammiilee biroofillee carraa hojii uumuu fi galii gibiraa biyyattiin argattuun faayidaa hedduu kan qabu akka ta'e Daraartuun BBCtti himte.
"Duraan hojii investimantii osoo hin eegaliin atiletiksiin ala hojiin ulfaataan kan jiru natti hin fakkaatu ture" kan jettu Daraartuun, hojiin hundi kutannoo akka barbaadu himti.
Kanaafis jabinaa fi obsa atileetiksii keessatti baratteetti fayyadamuun hojii investimantii gaggeessaa kan jirtu yemmuu ta'u, yeroo ammaa kanatti dameelee investimantii kan akka hoteelaa fi gamoo tajaajilawwan garaagaraaf oolu ijaarsisuun kireessuu irratti argamti.
Hoteelli maqaasheetin mogga'e fi magaalaa Asallaa keessatti argamu namoota 80 oliif carraa hojii kan uumedha.
"Ijaarsi gamoowwan tajaajila adda addaa abbaa darbii 16 magaalaa Finfinnee fi gamoo abbaa darbii 8 magaalaa Adaamaatti yeroo xumuramanis namoota baay'eef carraa hojii kan uumanidha." jechuun Daraartuun himti.